Hot Vacuum Insulated Cartoon 304 Stainless Steel Cup Children's Thermos Cup With Straw factory and manufacturers |Hanying
အံဆွဲ Desk စည်းရုံးရေးမှူး Desktop ကိုသိုလှောင် Box ကိုအလှကုန် S က ...
ပုံနှိပ်အဝတ်ဖုန်မှုန့်အဖုံးအမြင့် Qu ၏ကိုရီးယားဗားရှင်း ...
အကောင်းဆုံး 2018 ပလတ်စတစ် Adjustments ကိုနှစ်ချက်ဖိနပ် Rac ရောင်းချခြင်း ...
2019 ပူရောင်းဖိနပ်စည်းရုံးရေးမှူးဖိနပ်ထိန်သိမ်း display ကိုဖိနပ် ...
2019 နောက်ဆုံးရမော်ဒယ်ဖိနပ် Space ကို Saver ပလတ်စတစ်ဖိနပ် slot က ...
Hot လူကြိုက်များတဲ့ foldable ပလတ်စတစ်ဖိနပ်သိမ်းတန်းအရည်အသွေး Chine ...
အလွယ်တကူ 2018 သစ်ကိုသုပ် Cutter Bowl သစ်သီးဟင်းသီးဟင်းရွက် Sa ...
အပူပိုင်း 2018 သုပ်တိုးတက်မှုနှုန်းစက်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ...
ဘက်စုံသုံးကို Double-မြို့ရိုးကိုရေ Filtration B ကိုယိုစီးမှု ...
ပူပြင်းတဲ့ဖုန်စုပ် insulator တွင်လည်းကာတွန်း Straw နှင့်အတူ 304 သံမဏိဖလားကလေးများ Thermos ဖလား
Overview Quick Details Drinkware Type: Vacuum Flasks & Thermoses Applicable People: Children Thermal Insulation Performance: 12-24 hours Bottle Type: Vacuum Shape: Straight Cup Production: Vacuum Flasks Metal Type: ...
လေဟာနယ်ဘူး & Thermoses
Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
အနီ, အညို, အစိမ်း, ပန်းရောင်အပြာ,
သားသမီးရဲ့ thermos ခွက်ကို
Hot အေး 24 နာရီသောက် Keeping
* 28cm 12 * 10
နေ့နှုန်း 5000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ထုပ်ပိုး & Delivery
ပုံမှန်ထုပ်ပိုးသေတ္တာသို့မဟုတ်စက္ဏူထူသည်။ အသီးအသီးအစုံများအတွက်ထုပ်ပိုးစိတ်ကြိုက်မှကြိုဆိုပါတယ်, တစ်ဦးညိုသေတ္တာသို့မဟုတ်အရောင် box ထဲမှာ 4pcs / 6pcs / 8pcs / 10pcs 12pcs / ကိုင်ထားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီသေတ္တာပေါ်တွင်သင်၏လိုဂိုပုံနှိပ်
ningbo, ရှန်ဟိုင်း, Shenzhen, ကွမ်ကျိုးသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျလိုခငျြတရုတ်နိုင်ငံတွင်
အရေအတွက် (ပိုငျးပိုငျး) 1000 - 1 5000 - 1001 > 5000
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့က)58 ညှိနှိုင်းရမည့်
1, thepackaging ထုပ်ပိုးဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဒီဇိုင်း, ကိုယ်ပိုင်ထုပ်ပိုးလည်း "တရုတ်မှာရှိတဲ့လုပ်" စတစ်ကာ add, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (လိုဂို) ဖောက်သည်တွေနဲ့မှတ်သားနိုင်ပြီးဒါပေါ်တွင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကကူညီ, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိမ့်မယ် အမှတ်တံဆိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
2, ငါတို့သည်ကိုယ်ထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးစီးဌာန get နှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်းအသစ်စံချိန်စံညွှန်းများ ofexcellence ထားကြ၏။
1. နမူနာအဘို့အ FedEx / DHL / UPS / TNT, တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်;
2. FCL အဘို့အသုတ်ကုန်စည်များအတွက် Air လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်သို့မဟုတ်ပင်လယ်ပြင်အားဖွငျ့၎င်းငျး, လက်ခံရရှိလေဆိပ် / ဆိပ်ကမ်း;
3. ကုန်တင် forwarding သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းရေကြောင်းနည်းလမ်းများသတ်မှတ်ခြင်းဖောက်သည်;
4. ကြာချိန်: နမူနာဘို့ 3-7 ရက်အတွင်း; အသုတ်ကုန်စည်များအတွက် 5-25 ရက်အတွင်း;
1. ငွေပေးချေမှုရမည့်: T / T, အနောကျပိုငျးသမဂ္ဂ (ငွေပေးချေမှု-အွန်လိုင်း)
2. အားလုံးအဓိကအကြွေးကဒ်များကိုလုံခြုံငွေပေးချေမှု Processor ကိုအာမခံငွေမှတဆင့်လက်ခံခဲ့သည်နေကြသည်။
3. ငွေပေးချေနိုင်ရန်3ရက်အတွင်းစေရဆုံး
ယခင်: အမေဇုံထိပ်တန်းရောင်းအား Multi-function ကိုအကြီးစားစွမ်းရည်မီးဖိုချောင် tool ကိုပလပ်စတစ်မီးဖိုချောင် tools တွေကိုအမွှေးအကြိုင်အိုးတလုံးအစုံ / အမွှေးအကြိုင်ထိန်သိမ်းထား
နောက်တစ်ခု: ပူရောင်းချခြင်းကို double ဖိနပ် slot နှစ်ခုပလပ်စတစ်ဖိနပ်သိုလှောင်မှု slot နှစ်ခုအိမ်ထောင်စုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ချိန်ညှိဖိနပ်ထိန်သိမ်းဖိနပ်စည်းရုံးရေးမှူးအာကာသချွေတာ
hot ရောင်းရေချိုးခန်းအမှိုက်ပုံးထဲနိုင်သလားအိမ်ထောင်စုမီးဖိုချောင် P ကို ​​...
နော်ဒစ်ရိုးရှင်းသောကလေးသူငယ်ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုဖျာကလေး tab ကို ...
နယူးကုန်ပစ္စည်းအကြံပြုချက်များပလတ်စတစ် Multi Windproof Clip ...
လက်ကားအိမ်ထောင်စုရေချိုးခန်းအမှိုက်ပုံးထဲ Bin ကိုမီးဖိုချောင် ...
လက်ကား4Claws ကြိုးကွင်းအိတ်ဆောင်ယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာ ...
လှိုင်းပုံစံပတ်ပတ်လည်ဆီလီကွန်ရာအရပျဖျာ Anti-ပူ ...
Yiwu Hanying နေ့စဉ် Co. , Ltd ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသေးငယ်တဲ့ကုန်စည်စျေးကွက် (Yiwu နိုင်ငံတကာကုန်စည်ဒိုင်စျေးကွက်) အနီး, တရုတ်, Yiwu စီးတီး, Zhejiang ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။
အမှတ် 6, Suxin လမ်း, Suxi Yibei စက်မှုဇုံ, Yiwu